आन्हुई जाने रेल （यात्रा संस्मरण） - China Radio International
आन्हुई जाने रेल （यात्रा संस्मरण）
(GMT+08:00) 2017-04-26 15:02:02
एउटा स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन भनेर हामी 2016 को अप्रिल 07 तारिखका दिन पैचिङ्गबाट आन्हुई प्रान्तको हफेई सहरतर्फको तीव्र गतिको रेल समात्न विहान सात बजेतिर निवासबाट निस्कियौं। म र मेरो साथमा रहेका पाकिस्तानी मित्र दुवै जना विदेशी, त्यसमाथि राजधानी पैचिङ्गदेखि बाहिर जानुपर्ने, नयाँ ठाउँ, विना सहयोगी, भाषिक अज्ञानता आदि कारणले हामीलाई रेल चढिनसक्दा सम्म चिन्ता र हडबडीले समातिरहेको थियो। केवल यस यात्राका कारण हामी छोटो समयमा बनिएका साथी थियौं र म एकअर्कालाई चिन्ता नलिन प्रोत्साहित गरिरहेपनि हठात् हराइयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता चाहिं हामी दुवैमा थियो। सब वेबाट भित्रभित्रै कता हो कता छिर्दैछिर्दै भव्य प्ल्याटफर्मको प्रतिक्षालयमा पुगेपछि हामीलाई सन्तोष लाग्यो। अव चाहिं हराइँदैन।
पाकिस्तानी मित्र र म रेलको आठौं डिब्बाभित्र छिर्‍यौं। अरु यात्रुहरु डिब्बाभित्र छिर्ने क्रम जारी थियो। आफ्नो सिटको सबैकुरा मिलाइसकेपछि हामी एकछिन बाहिरपट्टि निस्कियौं, प्ल्याटफर्म, रेल र अरु जे जे देखिन्छ त्यही हेर्न। पाकिस्तानी मित्रले आफ्नो मोबाइल क्यामरा देखाउँदै भने - जनाव यहाँ प्रेस किजिएगा, मैं कुछ बोलुङ्गा।
जसै मैले ओके गरें उनले बोल्न थाले - पैचिङ्ग रेलवेको दक्षिण स्टेशनबाट दर्शकवृन्दमा अभिवादन। फास्ट ट्रेनको यात्रा केही बेरमा सुरु हुँदैछ। आज म तपाइँहरुलाई चिनियाँ फास्ट रेलको बारेमा जानकारी सहित तीव्र गतिमा यात्रा गराउनेछु। अग्रभागबाट एकजना परिचारिका र सुरक्षाकर्मीहरु आफूतिर आइरहेको देखेर उनले वाक्य यत्तिकैमा टुङ्ग्याए। र भने– लक्ष्मीजी पुलिस आइरहेको छ कतै भिडियो नखिच भन्नलाई त हैन?
एकपटक मैले एक चिनियाँ साथीको परिवारलाई अर्को कुनै रेलवे स्टेशनमा पुर्‍याउन गएको थिएँ। जव उनीहरुलाई छोडेर बाहिर निस्किँदै थिएँ, मैले केही फोटोहरु खिचें। यो दृश्य देखेर सुरक्षाकर्मीले मलाई हपारेको मलाई सम्झना आयो। उनले फोटो मेटाउन आदेश दिएपनि मैले मेटाएको जस्तो नाटक मात्रै गरें खासमा त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण फोटो नभएकाले त्यत्रो बबाल मच्चाउने कुनै कारण पनि थिएन। विदेशीले मात्रै खिच्न नपाउने वा स्वदेशीले पनि? स्वदेशीले खिचेको फोटो विदेशीले लिन सक्छ भने यसमा किन विवाद? यस्तै तर्क मेरो मनमा आएको थियो जुन मैले पाकिस्तानी मित्रलाई सुनाएपछि कता कता संकोच लागिरहेको थियो उनलाई पनि।
उनले फेरि भने – अरे जनाव । पाकिस्तान तो चीनमा अच्छा दोस्त है। कुछ नही बिगाडेगा।
पाकिस्तानी मित्रमा चीनको पुरानो तर अधिक मिल्ने देश पाकिस्तानी हुनुको आत्मविश्वास पुनः जागृत भयो र फेरि सुटिङ्ग गर्न थालियो- मित्रहरु आज म चीनको राजधानी पैचिङ्गबाट आन्हुई प्रान्तसम्मको एक हजार एक सय9किलोमिटरको दुरी पार गर्दैछु। करीब4घण्टा 27 मिनेटमा म हफेई सहर पुग्नेछु। अहिले यो रेल गुड्नुअघि म केही जानकारी दिँदैछु।
पाकिस्तानीले मलाई दृष्य लिने तरीका सिकाए, पृष्ठभूमि र रेलको पुरा आकृति आउनेगरी खिच्न लगाए र फेरि आफ्नो गतिविधिलाई जारी राखे – यो भिडियो हेरिरहनुभएका तमाम दर्शकहरु चीनका सामु विकासका अनेकन् आश्चर्यजनक कुराहरु छन्। तीमध्येको एउटा तीव्र गतिको रेललाई पनि लिन सकिन्छ। सन् 1999 मा छिनह्वाङ्ताउ-शनयाङ्ग हाइस्पीड रेलको निर्माणबाट चीनले तीव्र गतिका रेलवे लाइन विस्तार आरम्भ गरेको थियो। हाल आएर तीव्र गतिको रेल निर्माणमा चीन विश्वकै नम्बर एक स्थानमा पुगेको छ। सन् 2012 को अन्त्यसम्ममा 17 हजार किलोमिटरको तीव्र गतिको रेल सेवा संचालन गरिसकेको चिनियाँ तीव्र गतिका रेलवेको स्पीड औसत 200-300 भन्दा माथि किलोमिटर प्रतिघण्टा हुने गर्छ।
मैले ईशारा गरें कि यात्रुहरु धमाधम डिब्बाभित्र छिरिरहेका छन्, हामी पनि छिटो गरौं। उनले मेरो संकेतलाई आत्मसात गर्दै वाक्यहरु छिटो छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरे।
मित्रहरु आगामी सन् 2020 सम्ममा चीनको लक्ष्य सवैभन्दा ठूला, सबैभन्दा तीव्र र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त तीव्र गतिको रेल बनाउने योजनालाई सामान्य मान्न सकिँदैन। मुख्य रेल लाइन निर्माण सकिएको अवस्थामा चीनको तीव्र गतिको रेलको सञ्जालले 30 हजार किलोमिटर पार गर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। चिनियाँ तीव्र गतिको रेलको सञ्जाल चार विशेषताद्वारा गठित भएको छ – एक, संचालनमा रहेका रेल लाइनलाई स्तरोन्नति गर्दै तीव्र गतिका रेल संचालनका लागि व्यवस्थापन गर्ने। दुई, यात्रुप्रति समर्पित राष्ट्रिय संजाल। तीन, निश्चित क्षेत्रीय अन्तरशहरी तीव्र गतिको रेल लाइन र चार, चुम्बकीय लाईन (Maglev High Speed Rail) द्वारा आकर्षित तीव्र गतिको रेल सेवा।
(Maglev High Speed Rail भनेको चुम्बकद्वारा बेग हान्ने तीव्र गतिको रेल सेवा हो जुन विश्वमै पहिलोपटक साँघाइ माग्लेभ ट्रेन भनेर स्थापना गरिएको हो। साँघाइ नगरपालिकाद्वारा यसको संचालन गरिएको हो। जव की अन्य तीव्र गतिको रेल सेवा चिनियाँ रेलवे कोअपरेसनले संचालन स्वामित्व लिएको छ। Shanghai को Maglev Train सन् 2004 मा पहिलोपटक संचालनमा ल्याईएको थियो जसको अधिकतम् गति 431 किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ। यो साँघाइ फुतोङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र साघाईको लोङ्गयाङ्ग रोड मेट्रो स्टेसनमा संचालित छ।) अव म रेलभित्र छिरें, हेर्दै जानुहोला चीनको तिव्र गतिको रेलको रफ्तार कस्तो हुनेरहेछ। मसँगै यस यात्राको मजा लिनुहोला।
पाकिस्तानी मित्र रेलको डिब्बाबाट भित्र छिरेको दृश्य खिच्दै मैले पनि मोबाइलको भिडियो बटम बन्द गरें र गएर सिटमा बसें। उनले कलात्मक ढंगले बोल्दाको क्षणमा हल्का शब्दहरु दोहोर्‍याउनुबाहेक समग्रमा राम्रो बोलेको थिए, व्यावसायिकता झल्किन्थ्यो उनको पत्रकारितामा। उनले सबै दृश्य हेरे र भने - अरे वाह, आपने तो अच्छा शुटिङ्ग किया, एडिट करना नहीं पडेगा।
मलाई हौस्याउँदै पाकिस्तानी साथीले रेलभित्रको परिदृश्य नियाल्दै थिए। उनको ध्याउन्न थियो कि कहाँबाट भिडियो लिँदा राम्रो आउँछ र दर्शकलाई मन पर्छ।
रेल गुड्न सुरु गर्‍यो। हामी डिब्बाको पछाडिबाट दोश्रो लाइनको सिटमा थियौं। अगाडिको दृश्य सबै देख्न सकिन्थ्यो। मानिसहरु उस्तो खचाखच थिएनन्। अगाडी डिब्बा पार हुनेतिरका कतिपय सिटहरु त खाली पनि थिए। यात्रुहरुका अनुहार फरक फरक थिए। कोही पैचिङ्गका स्थानीयजस्ता देखिन्थे कतिपय अनुहार अलिक फरक देख्दा हामी अनुमान गर्थ्यौं कि त्यो आन्हुईको स्थानीय होला। त्यसो त फरक फरक अनुहार पहिचान गर्ने हाम्रो कुनै ल्याकत त थिएन तथापि कुरामा कुरा निस्किँदै गए। हाम्रो डिब्बाको भित्तामा रहेको स्क्रिनमा स्पीड देखायो - 303 किलोमिटर प्रतिघण्टा।
आधिकारिक रुपमा दोश्रो पटक मैले तीव्र गतिको रेलको अनुभव गरेको हुँ। पहिलो पटक पैचिङ्गबाट थ्यानचिन सहर जाँदाको रेल चढ्दा मैले रेल गुड्न थालेको पत्तै पाएको थिइन। 115 किलोमिटर दुरी र 33 मिनेटको समयावधि कतिखेर चिप्लियो, थाहै पाउन सकिएन। अव स्पीड लिन्छ होला भन्ने सोच्दा सोच्दै रेल सिधै गन्तव्यमा पुगेपछि मैले सहयात्री साथीलाई सोधेको थिएँ- खै त? तीव्र गतिको रेलले तीव्रता कतिखेर लिन्छ? त्यस बेला मलाई रेल बेस्सरी कुदेको अनुभव हुन नपाएपछि म सोचिरहेको थिएँ, दोश्रो पटक झ्यालबाट बाहिर हेरेर बस्तुहरु र रेलको दौडाइलाई दाँज्नेछु र तीव्रताको अनुभव लिनेछु।
हफेईका लागि रेलले गति लियो र तीव्र गतिको स्पीड पनि समात्यो फेरि पनि मलाई उही पुरानै आभाष दोहोरियो। यसपटक भने मैले झ्यालबाट बाहिर नियालें। रेल जहाँको त्यही छ तर बाहिरका दृश्यहरु एकपछि अर्को गर्दै कुदेको कुदयै छन्। रुखहरु, भवनहरु, फाँटहरु, क्यानभासमा चित्र कोरिएझैं लाग्ने अन्नबालीका फसलहरु, थुम्काहरु, पारिलो घामले टलक्क टल्किएका पाखाहरु, छायाँमा मुर्झाएजस्ता वस्तुहरु, सिंचाईका लागि पानी सङ्ग्रह गरिराखिएका ठूल्ठुला ताल तलैयाहरु, एकैनासका लामा लामा समथर गराखेतहरु, थुम्काथुम्का छिचोल्दै रेल अघि बढिरहेको थियो। भीमकाय पहाडहरुभित्र छिर्दा केही बेर बाहिरी दृश्यहरु हेर्नबाट वञ्चित भइन्थ्यो तर सुरुङ्ग कटेपछि लाग्थ्यो निस्सासिएको जीवन फेरि खुलेर बाहिर निस्किएको छ। यस्ता थुम्कैथुम्काहरुलाई छलेर यस्सो घुमाएको भए भैहाल्थ्यो चिनियाँहरुलाई सुरुङ्ग खन्न कति रहर होला, झिनामसिना थुम्काहरुभित्र पनि के सुरुङ्ग खनेको होला जस्तो लाग्ने।
रेलभित्र रहुन्जेल हामीलाई आफू पुग्नुपर्ने कार्यक्रमका बारेमा त्यत्ति चासो रहेन। पाकिस्तानी मित्रलाई रेलभित्रको दृश्य छायाँकन गर्नुथियो। संकोच यो थियो कि कुनै चिनियाँ सहयोगी थिएन र कोही अङ्ग्रेजी बोल्ने विदेशी पनि त्यहाँ थिएन। अनुमति विना नै छायाङ्कन गरौं मानिसहरुले केही भन्ने हुन् कि, अथवा रेलभित्रको नियम के छ जानकारी छैन। हुन्छ होला, हुन्न होलाका बीचमा मैले एक उपाय निकालें। अगाडिबाट टिकट जाँच्दै पाको उमेरको कन्डक्टर आइरहेको थियो।
शाहीदजी, हामी सेल्फ सुटिङ्ग गरौँ, यदि यो कन्डक्टर हामीतिर हेरेर रिसायो भने वा कथंकथाचित डिलिट गर्न लगायो भने बाँकी सुटिङ्ग नगरौंला। कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने सुटिङ्ग गर्न पाइने रहेछ भन्ने बुझेर निरन्तरता दिउँला।
मैले मोबाइल खोलेर दुवैजनालाई कैद गर्दै नक्कली सुटिङ्ग आरम्भ गरें। तर सक्कली कुराहरु जिम्मेवारीपूर्वक व्यक्त गर्दै गयौं ताकि बाइट पनि काम लाग्न पनि सक्छ।
आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले हामी तीव्र गतिको रेलवे परियोजनामा संसारमै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी मानिने चीनको तीव्र गतिको रेलभित्र छौं। चीनमा तीव्र गतिका रेल सञ्जालको जालो आठ मुख्य जनघनत्व भएका सहरमा फैलिएको छ। हालसम्म चारवटा उत्तर-पूर्व तीव्र गतिको रेल सेवा र चारवटा पूर्व पश्चिम रेल सेवाले सेवा दिइरहेका छन्। चीनले आफ्नो एक निश्चित ध्येय लिएर तीव्र गतिको रेललाई विस्तार गरिरहेको छ। यति भन्दै गर्दा मेरा पाकिस्तानी मित्र पनि नजीकिँदै भिडियोमा मसँगै मुख देखाउन थाले।
लक्ष्मीजी आपने सही कहा है। देखिए दोस्तों हम ईस भिडियोमा क्या अच्छे दिखरहें है। हम आन्हुईकी हफेईके सफरमै हैं।
हाम्रो उद्देश्य थियो नाटक गरेर भएपनि भिडियो खिच्न पाउने/नपाउने कुराको निषेध वा अनुमति के हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु। त्यसैले घरि उठे झैं, घरि बसे झैं, सिटबाट बाहिर निस्किएर, सिटमा ढल्किएर, स्वर अलिक ठूलो पारेर, वरिपरिका यात्रुहरुको ध्यान बिच्काएर र अन्ततः परिचारिकाहरु र त्यो आक्रामक मुहार भएको कन्डक्टरलाई देखाएर सुटिङ्ग गर्नुको रहस्य पनि त्यही थियो।
यदि छायाङ्कन राम्रो भएमा यही नक्कली बाइट पनि प्रयोग गर्न सकिने उद्देश्यका साथ शाहीदले पनि जानेजतिका कुराहरु बेलविस्तार लगाए - आठौं विश्व स्वास्थ्य संरक्षण सम्मेलन चीनको आन्हुई प्रान्तको हफेई सहरमा अप्रिलको आठ तारिखदेखि हुँदैछ। मौका मिलेमा पहेंलो पहाड अर्थात् ह्वाङ्ग शान त निकै प्रसिद्धि कमाएको पहाड चढ्ने इच्छा छ यसबारेमा सारा चिनियाँ तथा पाकिस्तानी र नेपाली मित्रहरु जो कोही पनि अपरिचित हुने कारणै छैन होला। अर्को ठाउँबारे मैले सुनेको छु - बाउ ह रिभर पार्क जो सुङ्ग राजवंशकालमा पाउ चङ्ग र उनका पुर्खाहरु विराजमान भएकाले नामले ख्यातिप्राप्त, प्रतिष्ठित र सम्मानित स्थल। अर्को ठाउँ स्याउ याओ चिन पार्क, जो दुई लाख वर्ग किलोमिटरमा फैलिएर एकतिहाई भाग पानीले भरिएको बगैंचा हो। थकित र व्यथित मनहरुलाई शीतलता र न्यानोपन विना भेदभाव बाँड्ने यो पार्कको पनि आफ्नै प्रसिद्धि। र, मोहक माउन्टेन शु, - ह्वाङ्गशानको मृगतृष्णा पालेर आन्हुई पुग्ने मानिसका लागि यो कुन कस्तो पहाड हो भनेर यसलाई छायाँमा पार्न सक्छन्। 284 मिटर अग्लो यो पहाडबाट छाउने सौन्दर्य मादकता चारै ऋतुमा उत्तिकै लोभलाग्दो हुन्छ।
कन्डक्टरले विपरीत सिटका यात्रुहरुको टिकट रुजु गरिरहेको थियो। मैले भने- अलिक चर्को स्वरमा अन्तर्वार्ता दिनुस्, उसले पटक पटक हेर्दैछ हामीतिर, अझै उसको ध्यान खिचियोस्।
पाकिस्तानी मित्रले फेरि भने – हामी आन्हुईमा गएर पवित्र मिङ्गच्याओ टेम्पल हेर्नेछौ। बुद्धको मन्दिर भएकाले यसको पनि आफ्नै पवित्रताको इतिहास छ तर म खुद मुस्लिम भएकाले मलाई त्यसमा रुची नभएपनि मेरा नेपाली मित्रलाई चासो लाग्ने होला। हा हा । जिस्किने पारामा शाहीदले थप्दै गए मित्रहरु छिङ्गफङ्ग पेभिलियन सुन्नुभएको होला- यो मण्डपमा इतिहासका कुराहरु विशेषगरी राजदरबारकालका वस्तुहरु सङ्ग्रह गरिएकाले जो कोहीका लागि पनि रुचिकर हुनसक्छ। आर्ट ग्यालरी अडियोभिजुअल तथा प्रदर्शनी कक्ष आदि अनेक कुराहरु त्यहाँ रहेका छन्। मेरा क्यामराम्यानजीका संकेत अनुसार त्यो हेर्दै डरलाग्दो कन्डक्टर नजीक आइपुगेकाले मैले मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउन बाध्य हुनुपर्ला जस्तो छ हा हा हा।
छायाङ्कन कार्यलाई स्थगित गरेर हामीले पनि टिकट देखायौं। आफ्नो टिकट देखाइसकेपछि मैले भिडियो खोलेर हेर्न थालिहालें। हाम्रा यी सबै हर्कतबाट रेलका कर्मचारीहरुबाट खासै चासो नपाएपछि हामीले सुटिङ्ग गर्न पाउने निष्कर्ष निकाल्यौं र हाम्रो चकचकी अझै बढ्न थाल्यो।
हामी अरु कुरा पछि गरौंला अहिलेको मुख्य काम भनेको भित्री दृश्यहरु छायाङ्कन गर्नु हो। यो भएन भने भिडियो अधुरो हुन्छ। पाकिस्तानीलाई आफ्नो भिडियो छाँयाङ्कनको चटारो थियो। अलि अगाडिका गतिविधिलाई लिएर यात्रुहरुको ध्यान पनि हामीपट्टी नै थियो। केवल दुईजना मात्रै विदेशी त्यसमाथि अगाडिपछाडि, ओहोर दोहोर, हल्लाखल्ला, हँस्सीमज्जाक देखेर सबैले हामीतिर हेर्नु कुनै नौलो थिएन। त्यसैपनि विदेशी भन्ने वित्तिकै जस्ले पनि अलिक ध्यान त दिइहाल्छ। हामी पछाडिका सिटमा एक दम्पत्ति थियो, नवविवाहिता हुनुपर्छ। अर्कोपट्टी लाईनमा तीनसिटको लहरमा दुईजना थिए एक अधवैंशे, एकसीट खाली र अर्की एक नवयौवना।
हामी रेलभित्र चम्कीधम्की गरिरहँदा अरु मानिसहरुका अनुहारमा खासै प्रतिक्रिया हामीले ख्याल गरिरहेका थिएनौं। तर त्यो युवतीका अनुहारमा केही असामान्य रसायनहरु सल्बलाए झैं देखिन्थ्यो जस्तो कि आँखाभौं जोडिएला झैं घुरेर हेर्दै हुन्थी र अँध्यारो मुख लगाएकी हुन्थी। हेर्दा खाइलाग्दी संरचना भएकाले अलिक डर पनि लाग्यो। त्यसमाथि हामी खुर्रर्र अगाडि जाँदा पनि सिटबाट हेरिरहेकी हुन्थी, विनाकारण शौचालयभित्र वा तातोपानी लिन ओहोर दोहोर गरिरहेको हामीले चाल पाउनेगरी हेर्थी मानौं हाम्रा कारणले उसलाई झिंजो लागिरहेको छ।
चीनको केन्द्रमा रहेको आन्हुई प्रान्तलाई शाङ्गहाई , च्याङ्गसु, चच्याङ्ग, च्याङ्गसी, हनान र हुपेइ प्रान्तले घेरेको छ। चीनको पाँचौ ठूलो ताल नजीक पारेको आन्हुईको याङ्गसी नदीले दक्षिणबाट र हुवाई ह नदीले उत्तरबाट बीचमा पारेको छ।
मैले शाहीदजीसँग कुरा लगाएँ-यहाँ भएका मध्ये त्यो नवयौवनाले हामीलाई एकटकले हेरिरहेकी छे। कि त मन पराएर हो, कि त हाम्रो चकचकीले रिसाएर हो। हा हा । लगत्तै परिचारिका खानेकुराको ट्रली बोकेर नजीक नजीक आइपुगी र त्यो घोप्टे सुन्दरीलाई ओझेलमा पारिदिई। खानेकुराहरु एक एक गरेर देखाउँदै उसले सोधी-यो चाहिन्छ? त्यो चाहिन्छ?
उसले चिनियाँमा दिएको खानेकुराको परिचयबारे हामीले कुनै भेउ पाएनौं। तैपनि मैले एउटा नाम उच्चारण गरें – लु चौ यौ मा?
आन्हुईको एउटा खाद्य परिकार चीनका आठ परिकारमध्ये एक पर्दछ। भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा आन्हुईले धेरै थरीका खाद्य स्वादहरुलाई ग्रहण गर्दछ तर प्राचीन लुचौ खाद्य परिकारले आन्हुईको नाम चम्काएको छ। आन्हुई घुम्न जाने पर्यटकले चार प्रकारका विशेष खाद्य परिकार लुचौ रोस्ट डक, लर्ड पाउ फिस, छाउछाउ चिकेन र ली होङ्गचाङ्ग हजपज खिचडीको स्वाद लिनसक्छन्। पैचिङ्ग रोस्ट डक जस्तै आन्हुईमा लुचौ रोस्ट डकले राजकीय परिकारको प्रतिष्ठा कमाएको छ।
परिचारिकाले छैन भनेर अगाडि बढी। हाम्रो अघिल्तिरबाट एउटा छेकवार हटेपछि मैले मुन्टो बटारें। रिसाहा युवतीको आकृतिमा उस्तै भावभङ्गी कायमै थियो मानौं हामीले सुन्दरी परिचारिकासँग बोल्दा उसमा जलनको पारो झनै बढिरहेको छ।
बोल्दै नबोल्ने मानिससँग हामीलाई के को लेनादेना? शाहीद क्यामरा लिएर अगाडिबाट डिब्बाभित्रका सफा सिटहरु, वातानुकुलित स्वच्छ, हवाईजहाजका एयर होस्टेस जस्तै सुन्दरीहरु, खानेकुरा, पिउने पानी, शौचालय आदि आदिबारेमा छायाङ्कन गर्दै शब्द पनि भर्न थाले।
हाम्रो हलचल अव धेरै बेर रहेन। दिउँसो करीब एक बज्नै लाग्दा हामी हफेईको रेलवे प्ल्याटफर्ममा पुग्यौं। अव त्यहाँ पुगेपछि हामीलाई लिन को आउँछ? कसरी भेट्ने? कताबाट निस्किने? आदि कुराहरु मनमा खेल्न थालें। हामी डिब्बाबाट निस्कियौं। मान्छेको बहुसंख्यक हुल जता जता लाग्छ हामी उतै उतै बग्दै गयौं। विशाल प्रतिक्षालय र सोधपुछ कक्ष आइपुग्यो। हामीले आयोजकको एउटा नम्बरमा फोन गरेपछि नारी आवाज आयो-पश्चिम गेटबाट निस्किनु, हामी कुरिरहेका हुन्छौं।
मैले भने यहाँ गेटहरु उस्तै उस्तै छन्। कुन दिशाबाट कता लाग्यो भने कहाँ पुगिन्छ हामीलाई थाहा हुन्न।
त्यसो भए जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बसिराख्नुस् हामी आउँदैछौं- भनेर उनले फोन राखिन्। हामी झोला भुँइमा राखेर सूचना डेस्कनेर उभियौं। हामीलाई लिन आउनेले प्रष्टै चिनोस् भनेर हामीले आफूलाई अलिक प्रष्ट रुपमा सूचना डेस्कका महिलाहरुलाई नै छेकिदिएका थियौं। कुनै मानिस उज्यालो अनुहार लाएर गुज्रिन्थ्यो कि हामीलाई लाग्थ्यो – ऊ हामीलाई लिन आयो।तर त्यस्तो गर्दा गर्दै हाम्रो समीपबाट धेरैले आफ्नो बाटो तताए, तर हामीलाई लिन भनेर कोही आएन।
विहानको अर्नी खाएर हिँडेका हामी मध्यान्ह पनि पार हुन लागिसक्यो। पेटभित्र मुसाको हुटहुटी मच्चिन थालेको थियो। कतिखेर पुगौंला र टन्न खाउँला भनेर हामी छटपटिरहेका थियौं, अत्ति भएपछि सूचना डेस्ककी महिलालाई फोन गर्न लगायौं कि हामी कहाँनेर छौं भनिदिनका लागि। उनले कुरा गर्दै गर्दा आयोजक स्वयंसेवी फोनमा कुरा गर्दै हाम्रो दिशातिर आइपुगी। मैले हात हल्लाएँ। ऊ कुरा गर्दै अलिक पाइलाको चाल बढाउन लागी। त्यतिञ्जेलसम्म मैले आफ्नो फोन हातमा लिइसकेको थिएँ तर ऊ अझै कुरा गर्दै थिई। - हेल्लो हामी यहाँ छौं।
उसले पुलुक्क हेरी र कागज देखाई-चिनियाँ अक्षरमा कुनै नाम लेखिएको थियो।
भनेपछि यो प्रयास पनि असफल भयो। उस्ले हामीलाई कुनै वास्तै गरिन।
लगत्तै दुई महिला आईपुगे र सो कागज बोकेकी केटीका अघिल्तिर उभिए। उनीहरुले सम्पर्क गर्ने मान्छे भेट्टाए। ती दुई महिलामा एकजना रेलमा देखिएकी रिसाही केटी पनि थिई।
हामीलाई सम्पर्क गर्ने केटी पनि उहीनेर आइपुगी।
मैले भनें – तिमीहरु हामीलाई लिन आएको हैन? तिम्री साथीले त हामीलाई हेर्दै हेरिनन्, कस्ती निष्ठुरी रैछिन्।
उनले भनिन्-उसको जिम्मामा ती दुई जना महिला हुन्, मेरो जिम्मामा तपाइँहरु दुईजना।
दुई स्वयंसेवीका साथमा हामी चारजना सङ्गै पछि पछि लाग्यौं। मैले केटीलाई ध्यानाकर्षण गर्दै भनें – अहो तपाइँ पनि सोही रेलमा हुनुहुन्थ्यो हैन? के तपाइँ पनि आठौं विश्व स्वास्थ्य संरक्षण सम्मेलनमा आउनु भएको हो? कहाँबाट हो?
मेरो प्रश्न सुनेपछि उसले भनी – हो हो। म चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआईको अनलाईन संस्करणबाट आएको, ती दिदी चाहिं सम्पादन विभागबाट आउनुभएकी, हाम्रो पनि भर्खरै परिचय भयो।
मैले भनें – हामी एउटै कार्यालयका रहेछौं, तपाइँ चिनियाँ भएर पनि सहयोगको तत्परता देखाउनुभएन नि। हामी दुई जना विदेशी यस्तरी भौतारिरहेका थियौं।
केटी हाँसी र भनी – मैले कसरी चिन्ने? त्यसमाथि तपाइँहरुजस्तो चकचकेहरुलाई सहयोगको के जरुरत पर्ला र?
मैले सिआरआईको टिसर्ट लगाएको देख्नुभएन?
मेरो रिसालु नखरालाई उसले नजरअन्दाज गरी- अर्काको छातीमा कस्ले हेरिराख्छ? कस्कोमा के लोगो हुन्छ कस्कोमा के? नमागीकनै कसैलाई सहयोग नगर्‍यो भने मान्छे चिनियाँ नागरिक बनिन्छ हो? त्यसमाथि नचिनेसम्म को हो को हो? हामी एउटै कार्यालयको भन्ने थाहा पाएको भए अघि नै सघाउनु परे सघाइहाल्थें नि।
ती दिदीले भनिन् – अरे तपाइँहरुलाई भोक लाग्या छैन? मलाई त कतिखेर पुगौंला र टन्न खाउँला जस्तो भैराछ।
भोकलागेको कुरा बाँकी तीन जनाले स्वीकार्‍यौं र कतिखेर होटल पुगिएला भनेर आत्तुरी पनि देखायौं। प्ल्याटफर्ममा अरु अरु पत्रकारहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै देखापर्दै गए। एक एक गर्दै ती दुई स्वयंसेविकाहरुले ल्याउँदै गाडीमा हुल्दै गए। झण्डै घण्टा लामो खोजीकार्य सकिएपछि गाडि हुँइकियो होटेलतर्फ। पन्ध्रबीस मिनेटमै होटेल पुगियो, चौँतीस तले भवनको पच्चीसौं तलामा हाम्रो कोठा तय गरियो तर दुर्भाग्य खानेकुराको कुनै चाँजोपाँचो गरिएन, लजालु विदेशीले भोक लागेको कुरा आयोजकलाई भन्न पनि सकेनन्। दुई चिनियाँ महिला पत्रकारहरु आआफ्नो कोठाको साँचो लिएर कता अलप भए पत्तो भएन।
भोलिपल्ट राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार योजना आयोग र जनगणतन्त्र आन्हुई प्रान्तीय सरकारको समर्थनमा चिनियाँ मेडिकल चिकित्सक एशोसियसन, चिनियाँ रेडक्रस फाउण्डेन, चिनियाँ स्वास्थ्य तथा औषधी विकास फाउण्डेशन र आन्हुई विश्वविद्यालय चिनियाँ औषधी लगायतको सह संयोजनमा आयोजित सम्मेलनमा हामी सहभागि भयौं। अप्रिल महिनाको आठ देखि दश तारिखसम्म यो सम्मेलन आयोजना भयो। स्वास्थ्यमूलक झाँकी, परम्परागत चिनियाँ उपचार पद्धति, छलफल आदि सिलसिलेवार कार्यक्रमहरु आयोजना गरिए।
विश्वका दशवटा मुलुक र क्षेत्रका विशेषज्ञ र व्यवसायका प्रतिनिधिहरूले भेला भई स्वास्थ्यका अनुभवको उपभोग गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा व्यवसायको भावी विकासबारे विचार-विमर्श गरे। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि छाइ ची मिङले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यमा रोगको उपचार गर्ने सन्दर्भमा पूर्व निवारण झन् महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिनुभयो।
विशेष आमन्त्रित भई सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका रुसी तेस्रो चिकित्सा विश्वविद्यालयका उपप्रमुख निकोलासले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बितेका केही वर्षयता चिनियाँ जडिबुटीको प्रचार-प्रसार रुसमा निकै विकसित हुँदैआएको जानकारी दिनुभयो। आम स्वास्थ्य, बृहत् तथ्याङ्क र बिशाल व्यवसाय भन्ने मुख्य नारा सहित आयोजित सम्मेलनमा स्वास्थ्यको भावी विकास सम्बन्धी नयाँ प्रवृत्तिबारे विविध दृष्टिबाट छलफल गरियो।
चिनियाँ भूमिमा ठूला कार्यक्रमको आयोजना हुनु नै विश्व स्वास्थ्य संरक्षण सम्मेलनको आफ्नै प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ किनभने सन् 1999 देखि हालसम्म यसले सफलताका साथ सात श्रेणी पार गर्ने मौका पाएको छ यही माटोमा।
आठौं सम्मेलनले प्रधान स्वास्थ्य, वृहत् तथ्य र विस्तृत उद्योग भन्ने शीर्षकमा विशेषज्ञ तथा अध्येताहरुलाई आकर्षित गरेको थियो।
आन्हुई पुग्ने वित्तिकै मेरा पाकिस्तानी मित्रले एक एक गर्दै त्यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरु खोतल्न थाले। ह्वाङ्ग शान त निकै प्रसिद्धि कमाएको पहाड भएकाले अघि नै त्यहाँ पुग्न पाइन्छ भन्ने आशा थियो। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यटकीय स्थलहरु त चीनमा जहिंतहीं भेटिन्छन्। चीनमा कुनै पनि पर्यटकीय स्थलहरुको जति गरिमा छ त्यो भन्दा बढी गरिमा त्यसमाथि गरिने अतिरञ्जनाले बढाउँछ जस्तो लाग्छ। चीनको जुनसुकै प्रान्तमा पुग्नुस् त्यहाँ कुनै न कुनै हेर्नलायकको पर्यटकीय गन्तव्य भेट्नुहुनेछ। सानै सही तर महिमा फैलाएर त्यसको भाउ निकै बढाइएजस्तै। पुगेको भोलिपल्ट अनेकन् कार्यक्रमहरुमा भ्याइनभ्याइ भयो। हामीले चिनियाँ परम्परागत स्वास्थ्य पद्वति, चिनियाँहरुको मौलिक स्वास्थ्य रहने शारीरिक व्यायाम कला, अद्भूत लाग्ने सामूहिक प्रदर्शनी नियाल्यौं। त्यसपछि विशाल हलमा अनेकन् परम्परागत जडीबुटीदेखि लिएर चिनियाँ मौलिक उपचार पद्धतिका पुराना तथा आधुनिक विकासका नमूनाहरु, विभिन्न प्रान्तबाट आमन्त्रित स्वास्थ्य वनस्पति तथा उपचार प्रणाली देख्दा लाग्थ्यो आफ्नो परम्परागत चिनियाँ उपचार（TCM）मा नामी बन्दै गएको चीनले यो प्रदर्शनीमा बहुमूल्य कला पस्किएको छ। कस्ता कस्ता झारपात मानवस्वास्थ्यका लागि कसरी औषधी बन्न सक्छन् भन्ने कुरा देखाइयो। त्यति मात्रै नभएर स्वास्थ्यप्रति चिनियाँहरु कति संवेदनशील छन्, कसरी सर्वदा स्वस्थ रहनका लागि खानपान, बसउठ, आनीबानीमा परिवर्तन गर्दै गएका छन् भनेर देखाइएको पुरानो देखि आधुनिक पुस्तासम्मको उत्पादन र जीवनयापन शैली देख्दा इच्छाशक्तिले जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सक्छ भनेर प्रेरणा फैलाउँथ्यो। स्वस्थ मानिसले खुशी नै खुशी देख्छ, हाँस्छ, रमाउँछ। सहभागि भएका आयोजकहरुको स्वस्थ र खुल्ला स्वागत सत्कार देख्दा नै झल्किन्थ्यो। सारा दिनभरि प्रदर्शनीमा अनि एकपछि अर्को गर्दै स्वास्थ्यका उपलब्धी विकास र संभाव्यताहरुका अनेकानेक उदाहरण हेरेर, गोष्ठी कार्यशालामा धाएर वित्यो।
त्यसको भोलिपल्ट विहान हामीलाई गाडिमा राखेर रेलवे स्टेशनमा छोडियो। हामीले आन्हुई भूमिलाई टेक्यौं र सिधै पैचिङ्ग फर्कियौं। जसरी सुन्दै आएका थियौं कि आन्हुई पुग्ने मान्छेले ह्वाङ्गशान पहाड चढेन भने उसको यात्रा असफल भयो। हामीभित्र मनोकांक्षा थियो तर परिस्थितिले पत्याएन। अव हाम्रो यात्रा सफल कि असफल?